Homeလေလံပွဲပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Polatli ရထားဘူတာ Yard ပြည်ထဲရေးနှင့်ပြင်ပနဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ်ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှု Elucidation နှင့်အတူလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
29 / 06 / 2016 Levent Ozen လေလံပွဲ, အထွေထွေ, Institute, mal လေလံ, ရထားလမ်းစနစ်များပြက္ခဒိန်, တူရကီ, TCDD 0
Polatli ရထားဘူတာ Yard ပြည်ထဲရေးနှင့်ပြင်ပနဲ့ LED မီးလုံးမီးအိမ်ကွင်းဆင်းဝန်ဆောင်မှု Elucidation နှင့်အတူလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
အဆိုပါ mounting ဧည့်ခံ၏ internal စတော့အိတ်သင်တန်းအမှတ်စဥ် Elucidation နှင့်အတူ LED မီးခွက်ကိုကိုင်ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပအကွက် FIELD ဘူတာ Polatli YHT İğcilerပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 237965
က) လိပ်စာ: Anafartalar Mah ၏ YHT TCDD ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု။ Hippodrome CAD ။ အမှတ်3ALTINDAĞဘူတာ / တူရကီ
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3123090515 / 1735 - 3123090575
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: koksalgenc@tcdd.gov.t
İğciler YHT နဲ့ LED မီးခွက်ကိုကိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်ချုပ်ရေး Polatli ရထားဘူတာ Yard အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင် Fields စတော့အိတ် Yard ၏ Elucidation နှင့်အတူ Inns ပွုပွငျ '
ခ) တည်နေရာ: သင်တန်းအမှတ်စဥ်ဆောင်ရွက်ခြင်း Polatli ရထားဘူတာနှင့်İğcilerစတော့အိတ်
ဂ) Delivery နေ့စွဲ: Delivery အချိန်စာချုပ်တင်သည့်နေ့မှ 45 ရက်ပေါင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
က) Place: Anafartalar ရပ်ကွက်အတွင်း, Hippodrome Caddesi, အဘယ်သူမျှမ:3ရောဂါ-တူရကီ / တူရကီ
ခ) နေ့စွဲနှင့်အချိန်: 19.07.2016 - 14: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Elucidation နှင့်အတူ Metro ဘူတာ၏ Led နည်းပညာကိုဝယ်ဦးမည် 04 / 05 / 2015 Elucidation နှင့်အတူ Metro ဘူတာ၏ Led နည်းပညာတူရကီအစ္စတန်ဘူလ် Metropolitan စည်ပင်သာယာဝယ်ယူပါလိမ့်မယ် Elucidation ဧည့်ခံ 4734 အမှတ်နှင့်အတူ Metro ဘူတာ၏ဘေးထွက်ရထားလမ်းစနစ်စီမံခန့်ခွဲရေး Led Technologies ကပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2015 / 50634 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Seyrantepe Metro Facility ငြိမ်းချမ်းရေးဆုခရိုင်ဘူတာလမ်းမကြီးလမ်း 34396 SEYRANTEPE ŞİŞLİ / အစ္စတန်ဘူလ်ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2123126515 - 2124554373 ဂ) e-mail လိပ်စာ : turgay.gokdemir@ibb.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းကိုအင်တာနက်လိပ်စာ (ရှိလျှင်) မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-နူးညံ့သော ...
အသစ်တံတားနဲ့ LED စနစ်များအားဖြင့် illuminated ခဲ့သည် 05 / 05 / 2014 အသစ်တံတားနဲ့ LED စနစ်များအားဖြင့် illuminated ခဲ့သည်: အဟောင်းသကြား Kazimpasa လမ်းတံတားအကြားလမ်းဆုံကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် Sakarya တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်လမ်းကြောင်း၏အဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ Landscaping အလုပ်သွေးလွှတ်ကြောတည်ရှိသည်တံတားပေါ်ဆက်လက်ပြုလုပ်သည့် LED အလင်းရောင်နှင့်အတူအလှတရားတစ်ခုထိထပ်ထည့်ဖို့ဖြစ်တယ်။ Sakarya တဲ့ Metropolitan အလုပ်တစ်မြှို့နယ်ခြင်းဖြင့်စတင်အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းပြီးစီးခဲ့သည်။ Kentpark ပေါင်းကူးဆက်သွယ်နှင့် Adapazari-Serdivan အကူးအပြောင်းသစ်ကိုလေ့လာမှုများသွေးလွှတ်ကြောကိုပြီးစီးခဲ့သည်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်လိမ့်မည်နှင့်အတူပေးအပ်အပန်းဖြေဘီး။ ရှည်လျားသောအကောင်အထည်ဖော်အကြောင်းတထောင်မီတာမှာအသစ်က link ကိုလမ်းအကြားဟောင်းများ Kazimpasa လမ်းနှင့်သကြားလမ်းဆုံ, ဒေသ၏ traffic ကိုစီးဆင်းမှုသိသိသာသာစိတ်သက်သာရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်သွေးလွှတ်ကြော ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Elucidation နှင့်အတူPehlivanköyဘူတာအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Landscaping သင်တန်းအမှတ်စဥ် 16 / 07 / 2013 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 1 ၏ TC Fields Elucidation အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်အတူPehlivanköyဘူတာအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Landscaping ။ အကာအကွယ်ပေးရေးစစ်တမ်းအပေါ်ပညတ်တရား၏နယ်ပယ်အတွင်းတစ်ဝိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှု၏ကွင်းဆင်းအလင်းပေးခြင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ၏သဘာဝအမွေအနှစ်တွေနဲ့တည်ဆောက်နေစီမံခန့်ခွဲရေးPehlivanköyဘူတာအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Landscaping, ပြန်လည်ထူထောင်ရေး, Restitution စီမံကိန်း, လမ်းတိုးတက်မှု, Landscaping စီမံကိန်းများနှင့်အကဲဖြတ်, သိုလှောင်ရေး, ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများနဲ့တူးဖော်မှုနှင့်အတူသူတို့၏ Applications ကို အဆိုပါ 23 Related ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်ခွုစည်းမျဉ်းများကသူတို့အလုပ်တို့ဝယ်ယူ။ အပိုဒ် (ယူနစ်စျေးနှုန်းလေလံ) နဲ့အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အတူတင်ဒါလိမ့်မည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 85044 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ။ TCDD 1 ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ispartakule နှင့်Lüleburgaz Peron နှင့်ဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်း LED မီးYaptırılacaktır 17 / 10 / 2016 Ispartakule နှင့်Lüleburgaz Peron နှင့် STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 1 ၏ဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်း LED မီးYaptırılacaktırသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ပိုင်ရှင်စီမံခန့်ခွဲရေး ISPARTAKULE တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်LÜLEBURGAZနဲ့ LED အလင်း FIELD တွင်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပလက်ဖောင်း IS နှင့်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2016 / 411511 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: TCDD 1 ။ ) ရုံးပိုင်ရှင်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲရေး 34716 Haydarpaşa / အစ္စတန်ဘူလ်ခဒေသန္တရတယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 2163488020 - 2163362257 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolge@tcdd.gov.tr ​​...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ယိမျးမယိုပိုင်ဆိုင်မှုအကဲဖြတ်ဝန်ဆောင်မှုများ expropriation ပညတ်တရားအားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်
အသစ်တံတားနဲ့ LED စနစ်များအားဖြင့် illuminated ခဲ့သည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Elucidation နှင့်အတူPehlivanköyဘူတာအဆောက်အအုံပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Landscaping သင်တန်းအမှတ်စဥ်
6 ။ ကြောင့်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုရထားဘူတာနှင့်ဘူတာများနှင့်မြင့်မားသောပါဝါ Projector ဆီမီးပါဝါအစားထိုး LED နှင့် / သို့မဟုတ် Led Elucidation ၏ကန်ထရိုက်အလုပ်လုပ်တယ်
6 ။ ကြောင့်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုရထားဘူတာနှင့်ဘူတာများနှင့်မြင့်မားသောပါဝါ Projector ဆီမီးပါဝါနဲ့ LED နှင့် / သို့မဟုတ်လေလံလုပ်ငန်းကို LED အလင်းပေးခြင်းအစားထိုး
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Çadırkayaဘူတာရုံတင်ဒါအတွက်သစ်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးအဓိကဦးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ၏လယ်ပြင် illuminating